Diyaarinta Wacyigeliyaha -- Preparing the Mobiliser; Guidance for the Trainer
বাংলা / Baṅgla
Yaa Noqon Kara Bulsho Wacyigiliye?
Qofna si gaara uma laha awood wanaagsan xagga wacyigiliyaha bulshada.
Ha maleyn, in tababar ama aqoon aad si gaar ah ugu taqasustay insi otomatik ah ay kaa dhigeyso inaad la shaqeyso bulshada. A certificate or diploma in social work, or related subjects, does not ensure a person will be effective in strengthening low income communities. Engineers, graduates in commerce or science, persons with only one year of elementary education, have all become community workers, with good effect.
Shahaado ama diblooma ee howlaha bulsho, ama madooyin la xiriira bulshada.
Macaddeyn karto in qofku yahay:
Mid saameyn ku yeelan kara xoojinta bulshooyinka dhaqaalahoodu hooseeyo. Injineerada, aqoonyahanada ganacsiga ama seyniska, qofka heer dugsi dhexe ah aqoontiisa. (see: Mobilisers Handbook). Ayaa gebigood noqday bulsho wacyigeliyayaal, lehna karti
Suurtagalnimada, noqoshada bulsho u shaqeeye waa mid ku timaada mid shaqsiga uu naftisa u doorto.
Hadii aad tababareyso wacyigeliyayaal karti leh, waxaad u dejineysaa barnamijkagasedansi aad uga dhigto mid u fudud tababartayaashaada in ay doortaan laba wado mid.
Cutubka ka hadlaya is diyaarinta waxaa u ka kooban yahay qalab aad u isticmaali karto inaad ku soo bandhigto wacyigeliyayasha bulshad eekartida leh qaabka shaqadooda, dabeecadaha shaqsiyadeed ay u baahan yihiin, iyotababarada ay galayaan.
See: Site Map. U Isticmaal si aad u abuurto jawi aykugo, ansan karaan inay sii wataant ababarada.
Saldhiga Qalabka Tababarka:
Shanta cutub ee boggan, tababarkan, waxaa uu ka kooban yahay noqolo yar yar, kuna haboon isticmaalka tababarada xiligooda, waxaana aad looga hadli doonaa laguna jilcin doonaaqeybo yar yar.
In the "Mobilisation Cycle" module, the document on "Being a Mobiliser" can be very useful here. Waxayna ku saleysan yihiin tusmada buuga qeybihiisa hore, kaasoo laga heli karo dhamanmeel walba oo baggan ka mida (Buuga Wacyigeliyaha). Waxay u kala qeybsan yihiin nuqulogacmeedyo yar yar oo loo isticmaalayo si gaar ah doodahat ababarada dhexdooda. Waxaad talo ku siin kartaa Ardada inay fiir fiiriyanxusuusqorka hadii ay rabaan inay bartaan dukumimtiyada dheer ee la socda qalabka tababarada.
In the module, the document "Job Descriptions" Cutubyada dambe waxay ka kooban yihiin dukumintiyo leh tusmooyin aad loo horumariyay.
Nuqul gacmeed walbaa waxaa la isticmaali karaa afartan daqiiqo kulanka tababarka (iyadoo la isticmaalayo isla magacii kulanka tababarka) marka aan ka hadleyno tababar bilow ah. Waxaad isticmaali kartaa cinwaano marka aad qorsheysato Tababarkaaga.
Adigoo ka bilaabaya liiska dhamey stiran ee qariirda Bogga, waxaad tixi kartaa waqtiyadaada tababarka sida ay uga muuqdaan shanta cutub, ama aad dib u habeysid adigoo eegaya baahidaada iyo tan dadka aad tababareyso.
Waxaad kalood sameynkataainad koobiyaysato nuqulada gacanta, iyo inaad kala doorato sabuuradaha cad cadama shaashad, si aad u fududeyso talo dhiibashada, doodaha, iyo ka qeybgalka.
Adiga ayay kugu xiran tahay inaad go’aansato sida aad u isticmaaleysid qalabka.
Waxaa ku talineynaa in kulan walbaa uu ku jiraa inta badan “waxqabad” ay sameyaan tababartayaasha, Iyo in la yareeyo qudbadeynta dheer iyo hadal hal meel u socda.
Waad qiyaasi kartaa inta waxqabad ee tababartayashu ku firfircoonaan karaan kulankiiba, waxaad kuu faa’ido badan inaad ka sameysato liis qoran oo in badan kuu noqdo raad raac aad ku isticmaashid kulanada tababarada.
Maxaa shaqo kuu yaal adiga, sidee u qabaneysaa?
Dukumintiyo la xiriira cutubyada kale:
Waxaa jira dukumintiyo ku jira cutubyada kale oo faa’iido leh hadii aad dooneyso inaad ku darsato oo markii horeba ku jiray midkan.
Cutubka “wareega wacyigelinta” dukumintiga ah “Noqoshada Wacyigeliye” waa mid aad muhiim ugu ah halkan.
Waxaa laga dhigi kataa laba noqolgacmeed,mid ah dabeecadaha shaqsiyadeed ee looga baahan yahay wacyigeliyaha, iyadoo qoran si taxan oo tababartaha uu arki karo uuna is weydiin karo hadii uu leeyahay ama ay leedahay dabeecadahan shaqsiyadeen.
Mida kale waa liis fudud oo ku qoran howl aha laga doonayo inuu ka qabto goobta shaqadiisa.
Labadaas ama mid kamid ah ayaa loo isticmaali karaa noqolgacmeed ahaan marka la joogo xiliga “is diyaarinta.”
Cutubka “isku duwida wacyigelinta” ("Managing Mobilisation") dukumintiga “Shaqo Qeexida” waxay soo bandhigeysaa qeexitaan faahfaahsan oo ah taqasusaadka looga baahan yahay iyo waxqabadka iyo masuuliyada laga filayo.
Cutubkaas, iyo “Ka qeyb galka Maamu” ( "Participatory Management") labadaba waxay tageerayaan xiriirka ka dhaxeya Maamulka iyo Wacyigelinta inuu ahaadaa mid wada socda, oo siwadajir ah u qeexaaya shaqada wacyigeliyaha.
(Nasiib daro in wacyigeliye walbaa uu shaqo ka helayo meesha uu kormeerihiisa ama kormeeraha uu ku qabnayo isku duwida ka qeybgalka — labadaas cutub ayaa ka hadlaya).
Hadii tababartayashu ku weydiistan faahfaahin dheerad ka ah noqol gacmedka ku jira “is diyaarinta” ka dibna shaqo qeexida noqolgacmeedku ayaa ku haboon.
Halkaanwaa cutubyadii dhan ee ku jira boggan kaas uu maskax badan geliyay sidii uu u soo bandhigi lahaa habab kala duwan oo tababaro kaasoo aad isticmaali karto qalabkan tababarka(Hababka Tababarka).
Marka aad dhidibada u aaseyso tababar cusub waa fiirisaa sid “is Diyaarinta” ka soo gal meesha ay ku qoran tahay “Hababka Tababarka” (Training Methods) cutubka hagida iyo tusaaloyinka sida aad u bilaabi karto barnaamijka tababarka.
Throughout this web site and the training programme it contains, the emphasis is on "learning by doing. Boggan dhexdiisa iyo barnaamijka tababarka waxay ka kooban yihiin oo ay xoojinayaan “ku barashada in loo qabto ficil ahaan.” Waxaan wax ku baranay siyaalo kala duwan mid dhex dhexaad iyo mid kaleba guud ahaan, si kastaba ha ahaatee, waxaan baran karnaa aqoon, xirfado gaar ah, inagoo sameynayna waxyaabaha intii aan ku ekaan lahayn maqal iyo Daawasho kaliya.
We encourage you to avoid looking for an othodox method to training. Waxaan talo ahaan ku bixinaynaa in laga fogaado raadinta habka la isku raacsan yahay oo ah hababka tababarada,ee isticmaal mid adiga kuu gaar ah oo ad soo saaratay si aan ugu dabaqdo tababarkaada, kuna saleysan baahida iyo xaaladaha tababartayaasha iyo dabeecadaha degaanka la xiriira.
Hadii aad horjooge ka tahay barnaamij tababar, waxaa lagula talinaya in aad noo soo qorta nagalan munaqishootaawaxyaabaha aad soo aragtay iyo fikradahaada. Hadii aad heyso talo soo jeedin, waxaan si wadajir ah u qaabeyn karnaa qalab cusub.
Last update: 2015.11.05